कैलाली घटनाले उब्जाएका प्रश्न, हामी कुन युगमा छौं ? « Janata Samachar
कैलाली घटनाले उब्जाएका प्रश्न, हामी कुन युगमा छौं ?
प्रकाशित मिति : 11 March, 2018 7:23 pm
एउटा मान्छेमा उन्पन्न आवेग र तान्त्रिकका आडम्बरमा हुने गरेका यस्ता अमानवीय घटनाले हेर्नेलाई मात्र होइन, सुन्ने जो कोहीलाई लज्जाबोध बनाउँछ । तर, कैलालीको घटनामा दर्शक र अपराधमा संलग्न सबै मनोरञ्जनका पात्र जस्तै बनेका देखिन्थें ।
विश्वका महिला १०८ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहेका थिए । गोष्ठी, सभा, अन्तरक्रिया त कतै महिला दोसल्ला र फूल मालाले सम्मानित हुँदैथिए । तर, मेरो देशको सुगम जिल्ला कैलालीमा भने एक किशोरीमाथि बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट भइरहेको थियो । विश्वले महिला अधिकारका पक्षमा आवाज उठाइरहँदा कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका–५ की १८ वर्षीय राधा चौधरीलाई सारा समाजलाई साक्षी राखेर कुटपिट गरिँदै थियो ।
सामाजिक विकृति र कुरितिका विरुद्ध दिनहुँ दर्जनौ गोष्ठी हुन्छन् । नेपालमा समाजिक संघ संस्थाले यस्ता गोष्ठीमा दैनिक लाखौं डलर खर्च गर्छन् । तर, बोक्सीका नाममा महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका घटनाको सार्वजनिकीकरण भने रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै छ । एउटा मान्छेमा उन्पन्न आवेग र तान्त्रिकका आडम्बरमा हुने गरेका यस्ता अमानवीय घटनाले हेर्नेलाई मात्र होइन, सुन्ने जो कोहीलाई लज्जाबोध बनाउँछ । तर, कैलालीको घटनामा दर्शक र अपराधमा संलग्न सबै मनोरञ्जनका पात्र जस्तै बनेका देखिन्थें ।
विज्ञानको युगमा आई पुग्दा चेतना भने ढुंगे युगको देखाउँदै गरिएको त्यो अमानवीय कार्यले राधाको मात्र होइन सम्पूर्ण महिलाको अपमान भएको छ । यो घटनाले सारा नेपालीको शिर निहुरिएको छ । कथित बाबाका नाममा रामबहादुर चौधरीले राधामाथि गरेको घृणित कार्यका लागि उनीमात्र होइन, रमाईलो मानेर फोटो खिच्ने र कुनै रोमाञ्चित नाटक हेरेजस्तै हेर्ने दर्शक पनि उत्तिकै दोषी छन् । रामबहादुरसँगै उनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
मुलुकमा कुनै पनि प्रथा वा कुरितीका नाममा कसैले कसैप्रति हिंसा गर्ने वा पीडा दिन पाइँदैन । मुलुक राजनैतिक रुपमा निकै अगाडि बढीसहेको छ । महिला निर्णायक तहमा पुगिसकेका छन् । तर, यही समाजमा महिला आज बोक्सीका नाममा हिंसाका शिकार भैरहनु परेको छ कस्तो बिडम्बना ? समाजमा रहेको संकुचित सोँच र चेतनामा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने यस्ता घटना दोहोरिरहन सक्छ । फेरी पनि धेरै राधाहरुले विनाकारण यातनाको शिकार भइरहनु पर्छ ।
कैलालीको घटनाले धेरै ठाउँमा प्रभाव पारेको छ । रमिता हेर्ने स्थानीय समाज, त्यति ठूलो हिंसा हुँदा टुलुटुलु हरेर फर्कने जनप्रतिनिधि र मुद्दा दर्ता गर्न नमान्ने प्रहरी सबैलाई सजाय हुनुपर्छ । जनताबाट भोट लिने बेला ठूला–ठूला अधिकारका कुरा गर्ने महिला समानता र समाजिक बिकृति हटाउँछु भन्ने मेयरका नारा वा भाषणका शब्दले राधाले भोगिरहेको यातनामा किन मल्हम लगाउन सकेन ?
कैलालीको घटनाले धेरै ठाउँमा प्रभाव पारेको छ । रमिता हेर्ने स्थानीय समाज, त्यति ठूलो हिंसा हुँदा टुलुटुलु हेरेर फर्कने जनप्रतिनिधि र मुद्दा दर्ता गर्न नमान्ने प्रहरी सबैलाई सजाय हुनुपर्छ । जनताबाट भोट लिने बेला ठूला–ठूला अधिकारका कुरा गर्ने महिला समानता र समाजिक बिकृति हटाउँछु भन्ने मेयरका नारा वा भाषणका शब्दले राधाले भोगिरहेको यातनामा किन मल्हम लगाउन सकेन ? जनताले भोट दिएर जिताएको अन्यायको रमिता हेर्न हो वा जनताको अधिकार रक्षा गर्न हो । जनप्रतिनिधि भएकाले बुझ्नु पर्छ । यस्ता जनप्रतिनिधिलाई कुर्सिमा बसिरहन सुहाउँछ की सुहाउँदैन त्यो पनि सोँच्नुपर्छ । तान्त्रिक वा अन्य कुनै बहानामा कसैमाथि त्यति ठूलो अपराध गरिनु हुँदैन । अन्याय पर्यो भन्दै प्रहरीमा जानेको मुद्दा दर्ता नगराउने प्रहरीले अपराधलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ । कानुनी रुपमा पनि कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाउन वा त्यसको नाममा यातना दिन पाइँदैन भन्ने कुरा प्रहरीले बुझनु पर्ने, अर्को तर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यति ठूलो बिषयलाई मिलापत्र गराउन खोजेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । कानुनले बर्जित गरेको बिषयमा मिलापत्र हुन सक्छ ? यसलाई पनि गम्भीर रुपमा हेरिनु पर्छ । अपराध नियन्त्रण गर्न खटिएको प्रहरीले अपराधिका बिरुद्ध जाहेरी नलिने र यति ठूलो अपराधमा मिलापत्र गर्दै हिड्ने हो भने नागरिकले कहाँ पाउने सुरक्षा ? घटनामा सबै भन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमूख भएको देखिन्छ । यो घटनामा मात्र होइन यस अघिका दिनमा भएका कयौं यस्ता घटनामा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नभएको र कयौं घटनामा उनीहरु परिवार समेत सहभागी भएको देखिएको समाचार आइरहन्थ्यो । यसले जनप्रतिनिधिको भूमिका, चेतना र जिम्मेवारी बोधमा पनि सोच्नु पर्नेहुन्छ ।
कैलालीको घटनामा के सम्म सुनियो भने, नगरपालिकाका मेयर र वडा अध्यक्षको रोहबरमा पीडितलाई बाध्य पारेर मिलापत्र गराइएको भनिएको छ । मेयर आफैले सञ्चार माध्यममा गैरजिम्मेवार र हास्यास्पद जवाफ दिँदै हिडेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य थाहा हुनुपर्छ की पर्दैन ? यो घटनाले समाजले न्याय पाउने कुरामा आफैले भोट हालेको प्रतिनिधि कति जिम्मेवार र इमान्दार भन भन्ने हेर्नुपर्ने भएको छ । भोलिका दिनमा कुनै पनि ब्यक्ति बोक्सी वा बोक्सोको नाममा कसैले यातना भोग्नु नपरोस् । समाज, राजनैतिक पार्टी, जनप्रतिनिधि र प्रहरी जिम्मेवार बनुन् ।